London To Paris In 2:20 maawa NaIroostar Chitima | Save A Train
musha > Travel Europe > London To Paris In 2:20 maawa NaIroostar Chitima
Nguva yekuverenga: 10 maminitsi(Last Updated On: 14/05/2020)
Rimwe rakajairika uye nyore nzira yokufamba pakati London uye Paris riri nomukombiyuta Eurostar, mukuru-nokukurumidza chitima unobva misoro miviri. Kunyange zvazvo pane imwe plethora zvokusarudza kuti vafambi vachitsvaka kuti hop, ari Eurostar inoramba imwe yakanakisisa nzira kuti nokukurumidza, mutengo, uye zvakanaka. The chitima anotora mukana pemvura mugero mugero, kana “chunnel,” akavaka pakati England uye France kuitira kuti imi mokurumidza nokwawaienda.
pazasi, unogona kuwana zvose iwe unenge uchida kuti akubatsire kushandisa London wako Paris Eurostar rwendo.
Nyaya iyi yakanyorwa kudzidzisa vatengi vanenge nechitima kufamba uye chakaitwa Save A Train, Iwo Akachipa Kwazvo Zvitiketi Iwewebsite MuEurope.
Tisati kutanga, regai mufananidzo wacho chaizvo nei Europe yakanakisisa noruzivo Via chitima kufamba- shure kwezvose, ino rave richigarwa kwemakore zvemakore, izvo zvinoreva kwezvivako zvayo iri kazhinji zvikuru dzakabudirira. Other modes chokufambisa dziripo nyore, asi pane chimwe chinhu chinofanira ati huru kukwezva chitima kufamba. Izvi ndezvechokwadi kunyanya nekuti vomuzana nguva vaifamba, who can take advantage of train schedules to hop on board just before it departs. Izvi zvakasiyana chaizvo muEurope dzendege, apo Minimum Kusvika nguva yako pamberi maendero iri maawa anenge maviri, uye imi Unopedza nguva yakawedzerwa uye mari pakufamba kuenda kwaaishanda kuti yendege nzvimbo.
Achitaura nguva kufamba, Europe Zvinonyatsozivikanwa kuti ayo marefu-nokukurumidza njanji, izvo kure outstrip kwayo ichitenderera motorways uye inconveniently riri dzendege. Zvitima rose kondinendi anokurumidza uye kazhinji zvakananga, izvo zvinoreva shoma nguva pakufamba kuenda kwaaishanda uye nenguva yakawanda kuongorora.
Chitima dzemapurisa vane mukana riri iri pedyo kuti chikuru nzvimbo dzokugara uye zvinokwezva, so it’s easy to step off your train and head directly to your destination.
London kuenda kuBrussels Eurostar Zvitima
London kuenda kuParis Eurostar Zvitima
Ryon kuenda kuLondon Eurostar Zvitima
London kuenda kuAmsterdam Eurostar Zvitima
Mugshot Ticket Your On A Eurostar Train
Chimwe chezvinhu zvakanaka zvekutora chitima kana ndege ndeyekuti Eurostar inomhanya kubva pakati peguta kusvika kuguta. Kusiyana dzendege kure dzakadai London Heathrow uye Paris Charles De Gaulle, chitima yako ngaubve London St-Pancras International uye anosvika Gare Du Nord, apo iwe unogona nyore kufamba vose veguta yepamwoyo zvisakamboonekwa.
Sezvambotaurwa, zvose Eurostar matikiti zvinosanganisira zvidimbu zviviri kubva mukwende uye bhegi ruoko. Kana uri kuunza yakawanda mukwende, unogona vasarudze yepamusoro kirasi tikiti kuti unobvumira yako munowedzera mabhegi. Mukupesana ne, bhajeti vendege anogona akamurairawo zvishoma nokuda kwavo kutanga bookings, asi bhegi mari yechikoro uye chigaro yakasarurwa mhosva nokukurumidza wedzera kukwira.
Tikiti mitengo nokuti rwendo urwu zvinoodza-chinja zvizhinji, saka isu dzinorumbidza kutenga matikiti mangoti unokwanisa. kazhinji kutaura, matikiti izvi kuenda Sale mitatu pachine, kunyange zvichienderana mwaka unogona kuwana navo mwedzi mitanhatu pachine. Tinoratidza kushandisa yedu Website kuwana uye bhuku rako chitima matikiti, iyo yaibva unonzvera zvose iripo uwandu kuti imi mutengo mutengo zvinobvira, avimbiswa.
London kuenda kuAntwerp Eurostar Zvitima
Lille kuenda kuLondon Eurostar Zvitima
London kuenda kuStrasbourg Eurostar Zvitima
London kuenda kuRotterdam Eurostar Zvitima
PRICING Uye Types Of Tickets
The Eurostar chitima unoshanda-kirasi matatu cabins, zvichienderana bhajeti yenyu. Nokuti avo kungotsvaka kuti panzvimbo imwe neimwe, wechipiri matikiti kirasi vari zvaunogona nezvechisarudzo. Vaya bhizimisi kufamba anogona pachinzvimbo vanosarudza Standard Premier kana Business Premier tikiti, zvose hunoita kuti kugara yomuzana mukirasi Coaches zvekudya panguva rwendo rwenyu, saka zvinoita kuti tidzidze zvishoma nezveLondon kuenda kuParis zvitima zvechitima:
Sezvo taona anotaurwa pamberi, Pricing kunoenderana dzenyu mazuva okufambisa, saka iwe unenge uchida bhuku kamwe Kuwanikwa anovhura. If you book far enough in advance, unenge uchitsvaga kuripira pamusoro 55 madhora imwe-nzira, kana 90 Dollars kumativi-rwendo. Waiting kusvikira yapera kutyaira mitengo denga-soro, pamwe mari zvinenge doubling zvapedzisira ukatenga tikiti yako. Izvi ichokwadi vose kumativi-rwendo uye imwe-nzira matikiti.
It kusvetuka kuti Eurostar haasi kuwanikwa navose kuchengeta njanji zvichipfuura, saka kana uchida kuti rwendo urwu chinhu vanonyengera oornag, kutenga rako chitima tikiti pachine. Unogona kuwana nezvitima matikiti paIndaneti pane Websites siyana, kunyange chitima tikiti mitengo kunogona inflated zvichienzaniswa Save A Train.
Calais kuenda kuLondon Eurostar zvitima
Bruges kuLondon Eurostar Zvitima
Iyo Haye kuLondon Eurostar Zvitima
Berlin kuenda kuLondon Eurostar Zvitima
Check-In At London St-Pancras Station
Zvichienderana yokufamba kirasi yako, iwe unenge uchida kusvika nokubviswa kwako chiteshi kanenge 40-60 maminitsi pamberi pechitima chinobva kuLondon kuenda paris. Kana iwe wakaverengeka kirasi yekutanga-Bhizinesi Yekutengesa tikiti kubva kuLondon kuenda kuParis, uchava kuwana chete Lounge. zvimwe, pane zvitoro zhinji uye mumaresitorendi iripo kuti peruse. Vamwe vedu kufarira mumaresitorendi zvinosanganisira:
AMT Coffee – A kofi chitoro pamwe munzvimbo mbiri mukati nhepfenyuro. Rinopa dzakaitwa nemaoko zvinwiwa uye zvakazara compostable nemikombe, izvo zvinoita zvakatipoteredza kunyemwerera.
The Barrel rakatenderera – A chinyakare Chirungu the pub kuti asaita ndege beers, chaiyo Nadto, gins, kofi, uye mweya. It ariwo zvemangwanani uye Classic bhawa yokufamba.
Chop'd – A resitorendi utano-pfungwa, Chop'd anopa zvakasiyana siyana soups, salads, stews uye Achiputira nokuda kwemarudzi ose revafambi.
Kuri kuti uri chete kugadzira rwendo zuva, panhepfenyuro uyewo inobudisa kuruboshwe-mukwende nzvimbo kuti kuchengeta mikwende wako. Izvi okuchengetera nzira dziri zvakachipa uye kazhinji vanopa yose maawa basa.
Cologne kuLondon Eurostar Zvitima
Ghent kuenda kuLondon Eurostar Zvitima
Middelburg kuenda kuLondon Eurostar Zvitima
Leiden kuLondon Eurostar Zvitima
Onboard The Eurostar Train
kamwe onboard, zvachose nguva kufamba kubva kuLondon kuti Paris ndiye anenge 2 maawa uye 16 maminitsi. Pamwe wako pre-kuenda kusvika, rwendo nguva yako yose ichava kumativi 3 maawa.
Sezvambotaurwa, pane akasununguka WiFi onboard, saka unogona kuramba nomwoyo Email wako nemagariro nevezvenhau zvinodiwa. Zvichienderana tikiti renyu, unogona musoro murairidzi dzokudyira, apo unogona kuwana chikafu, zvinwiwa uye nezvikafu zvishoma. Kana uri vagere wokutanga-kirasi kabhini, zvokudya vachaitwa zvakananga chigaro chako.
Dusseldorf kuLondon Eurostar Zvitima
Essen kuenda kuLondon Eurostar Zvitima
Munster kuenda kuLondon Eurostar Zvitima
Leuven kuLondon Eurostar Zvitima
Kusvika At Paris Gare Du Nord Train Station
Zvitima kubva St. Pancras chiteshi svika pakati Paris, panguva Gare du Nord chiteshi. Ichi chiteshi naka ndiro basa uri pachayo, wayo France yakavakwa pakati pezana okuma1800 uye akaramba zvakanaka. Tora nguva yokunakidzwa chivakwa asati vakananga kunoona guta.
Nekuti unenge akatopera cheki-pamberi ndabva UK musingadi vanofanira kupedza nokusvika kwacho. Izvi zvakare Pari zvechokwadi pasipoti kudzora, kunyange aine UK ndabva EU zvingangodaro kuti azvaiitwa vachatongerwa kuchinja.
Kamwe wasvikapo, uchava mumoyo peguta, pamwe vakawanda nzira zvokudya, zvitoro uye zvinwiwa. Kana ukasarudza kusiya nhepfenyuro, uchawana pedyo Brasserie Terminus Nord, a famous Art Nouveau style restaurant directly across the road from the train station. zvimwe, unofanira kungoti dzichidzungaira chero mirayiridzo kuwana zvimwe zvakanaka zvokudya nokumwa mu Europe.
Mukati pechiteshi chechitima pachayo, muchawana Metro uye RER nezvitima, uyewo nezvitima vaifamba yose France. njanji Local uye Metro nezvitima anogona kutora iwe ose guru French, kune vazhinji mamiziyamu, namaberere, uye vashanyi zvinokwezva mukati.
Kana uri kusvika mangwanani uye vaienda zvakananga kubva kutenderera usati kunoonekwa kuti hotera yako, ingava yakanaka pfungwa kuti kushandisa kuruboshwe-mukwende mikana zvinowanikwa mukati pechiteshi chechitima. Izvi okuchengetera Zvivako zvinoitika chipa uye anogona kuva chakanakisisa chingaitwa avo vachitsvaka maximize mazuva avo.
As a holder of the Eurostar direct train ticket, unokwanisa kuwana 2 nokuti 1 kuwana vazhinji mamiziyamu avo namaberere, iro rinogona kukuponesai mazana emadhora.
Frankfurt kuenda kuLondon Eurostar Zvitima
Munich kuenda kuLondon Eurostar Zvitima
Moutiers kuLondon Eurostar Zvitima
Marseilles kuLondon Eurostar Zvitima
Train Times For London To Paris With Eurostar
The Eurostar anomhanya kazhinji, pamwe kusvikira 19 kusimuka pazuva zvichienderana mazororo uye kwevhiki. The chitima pazuva rokutanga paunobuda pa 05:40 uye tora dzinokwana 2 maawa uye 37 maminitsi. Izvi Kazhinji mumwe yakachipa pashiri matikiti iripo, saka kana iwe hausati averse kuti ndichifumira mangwanani unogona kuponesa mari uye musoro panguva mambakwedza. Chimwe chakanakira ichi mangwanani maendero ndechokuti enyu kusvika nguva muParis ndiye 09:17, izvo zvinoreva une uzere zuva akakutungamirirai chero zvinhu unodawo kusarudza.
Route nguva kudaro Hourly kana kupfuura, izvo anokupa zvakawanda zvokusarudza pazviri kusarudza. The wokupedzisira chitima usiku paunobuda pa 18:31 uye anosvika 21:47, achikusiyirai yakawanda nguva kusvika hotera yako kana kunyange musoro kuti pousiku kudya uye Peek panguva vakapfeka magetsi ari Eiffel Tower. Izvi usiku nezvitima anogona pakanzi akarara motokari, izvo yakanaka nzira kubata maminitsi mashoma kurara vasati mberi parwendo rwenyu. Mukuwedzera, zvimwe zvitima anogona kufamba pakati dzakakurumbira dzakasiyana usiku hwose.
Den Helder kuLondon Eurostar Zvitima
Maastricht kuLondon Eurostar Zvitima
Dijon kuenda kuLondon Eurostar Zvitima
Bonn kuenda kuLondon Eurostar Zvitima
Mamwe Maitiro Neine Eroostar Chitima Icho chisiri London KuParis
Kunyange zvazvo nyaya ino iri kutaura kunonyanya pamusoro kufamba pakati St. Pancras International Station uye Gare Du Nord, ari Eurostar Unobudisawo dzinoverengeka zvakananga nzira dzokutengeserana kubva London:
kweBrussels – Zvitima vanomhanya ose 90 maminitsi 2 maawa. Zvinotora pfuurei 2 maawa kusvika kweBrussels midi / Zuid chiteshi.
Calais / Frethun- Zvitima kumhanya Hourly kana kupfuura kubva London uye zvachose chitima kufamba inongova pamusoro awa.
diki- Zvitima siya zvinenge Hourly kuna Lille, riri kuchamhembe kweFrance. Pane kubatana nyore kuti French TGV samambure kuti kuchinjwa. Journey nguva anenge 1.5 maawa.
Disneyland Paris – Zvitima vanomhanya kanoverengeka pavhiki rose gore uye zuva nezuva panguva chikoro mazororo. The chiteshi rworudyi kunze Disneyland suo. The Rwendo zvinotora pasi 3 maawa inosvika.
Lyon, Avignon, uye muMarseilles- Mumazana gore chitima ukashanda kubva 1 kuti 5 Mazuva pavhiki, kunyange zviri zvomwaka kukanganiswa saka kuva nechokwadi zviri kumhanya kana uchida. It Anodzivisawo pana Lyon Part-Dieu chiteshi (4.75 maawa), Avignon TGV chiteshi (6 maawa) uye muMarseilles St Charles chiteshi (6.5 maawa).
Aimé-La Plagne – Operating
Amsterdam uye reRotterdam – A basa idzva kuti yakatanga muna 2018, iwe vanongoita mumwe nezuva nezvitima kuna Amsterdam, rinosanganisira rurege MuRotterdam. Totally rwendo nguva yava 4 maawa.
Pane dzimwe nemwaka migwagwa dziripo mabasa akafanana chando Skiing, saka kuva nechokwadi kuti aone shure kazhinji kuona kana basa iri kumhanya.
Zviri Zvinogonekawo kuti tisvike nedzimwe dzakasiyana mukati Europe ne utilizing rimwe befu uye kupfuurira mberi kubva nhepfenyuro yaiva Lille, kweBrussels, uye Paris. Kuwana matikiti ezvitima kuri nyore uye risingadi chete avaiita.
Saizvozvowo, kana uri kufamba kuLondon kubva kumwewo UK, unogona kusarudza kutanga kwako Eurostar norwendo Ebbsfleet International Stations kana Ashford International Station panzvimbo St. Pancras. Izvi zvinonyanya kubatsira vaya vane motokari, sezvo Ashford achipa yokupakira garaji uye mbune pechiteshi chechitima.
Book Tickets With Save A Train For Your London To Paris Train
Search Nzvimbo yedu bhuku matikiti vose Europe yepamwoyo dzokugara, kusanganisira Bherujiyamu, Itari, Siwizarendi uye UK (kusanganisira London kuti Paris chitima pamwe Eurostar). kutsvaka kwedu injini yakagadzirirwa Chengetedza mari pamusoro matikiti zvose uye zvinosanganisira pasina Réservation yechikoro. Tinoita izvozvo nyore kuti kutenga nokubvuma akawanda nzira mubhadharo, kusanganisira kadhi, Giropay, Ideal uye zvakawanda.
saka, chero chikonzero chako yokufamba, kana uri kufamba oga kana nevamwe, tora maminitsi mashoma kutsvaga chitima matikiti musi Save ane Train, iyo inopa rakadzika mitengo, avimbiswa.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo? Click pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Flondon-paris-train%2F%0A - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml uye iwe unogona kushandura / Ave kuti / nl kana / nayo uye mimwe mitauro.
#garedunord #stpancras eurostar London Train Travel travelfrance travelparis uktravel
Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba Switzerland, Travel Europe
Kwokuwana Europe Most Magnificent Architecture
Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Italia, Travel Europe
10 Epic Nzvimbo dzekushanyira MuChina
10 Akanakisa Musoro Mapaki In Europe
7 Akanyanya Kushamisika Nhabvu Nhandare MuEurope
7 Akanaka Nhata Misika MuEurope